Faah Faahin Ku Saabsan Weerarkii Xalane iyo Maleeshiyaadkii Weerarka Soo Qaaday Oo Qaarkood Gacanta Lagu Dhigay – Radio Muqdisho
Ciidamada Amisom ee ku sugnaa xerada Xalane ayaa ka hortagay weerar Argagaxisada Al Shabaab ay ku soo qaadeen xeradaasi, iyadoo lagu laayay dhagar qabayaashii weerarka soo qaaday halka qaarkoodna lagu qabtay nolosha kuwaasi oo hadda gacanta lagu hayo.
weerarkaasi laga hortagay ayaa waxa uu ku bilowday Gaari nooha ah oo isku qarxiyay albaabka dhanka Madiina ee xerada Xalane, waxaana intaasi kaddib ay isku dayeen maleeshiyaadkaasi la marin habaabiyay in gudaha xerada ay galaan laakiin waa la fashiliyay weerarkaasi ay ka hortageen ciidamada Amisom.
Ciidamada ayaa toogtay 10 ruux oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii weerarkaasi argagaxisada Al Shabaab ku hungoobay halka 2 ruux oo ka mid ahaa falaagadaasi gacanta lagu dhigay oo hadda gacanta lagu hayo, waxaana wadarta guud ee weerarka soo qaaday ay ahaayeen 12 ruux.
Al Shabaab ayaa awoodoodo waxaa wiiqay Ciidamada Qalabka sida oo ku kala beegsanyay waayihii ugu dambeeyay gobolada dalka,deegaannada Howdka iyo magaalooyinka dalka taa oo ay mahdiyeen Bulshada Soomaaliyeed.
Afhayeenka Ciidamada Amisom Cali Aadan Xumad oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa xaqiijiyay in ay dileen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday 2 ka mid ahna ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadkaasi iyagoo nool, waxaana uu sheegay in ay dhinteen 5 ka mid ah askarta Amisom, waxaana uu intaa ku daray in goor dhow arrinkaasi ay war ka soo saari doonaan.
“DAAWO SAWIRRO”Arday ka badan 600 oo maanta ka qalin jebisay jaamacadda Plasma